: at 9/17/2009 05:58:00 PM
အဆိပ်ခွက် said... | Thursday, September 17, 2009 7:46:00 PM
အဟ ..အဖွားကီးကတော့လုပ်ပြီး.. ထိုင်းရတာ အညောင်းပြေလာဟင်.. အဲထူးထူးခြားခြား ၁ရတယ်...
နွေဆူးလင်္ကာ said... | Thursday, September 17, 2009 8:36:00 PM
အေးဗျာ တချို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကလည်း အာဏာလိုချင် ကြပြီဗျ။ သူတို့လည်း ၀င်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်လေ။
တောင်ပေါ်သား said... | Thursday, September 17, 2009 9:46:00 PM
ပြိုင်နေ ပြိုင်နေ အီးခုံလေးပေါ် တက်ထိုင်ရမှ အဟား ဟားးးး တရားသဖြင့် ပြိုင်သူများကို လေးစားပါတယ် .... ဘာတဲ့ 201? ဟုတ်လား မထင်ပေါင် မောင်တို့က
thawzin said... | Thursday, September 17, 2009 10:11:00 PM
ဟင်...... သားတို့က နားမပြောင်တဲ့အထဲမှာပါဘူးဗျာနော် အဲလိုလျှပ်စစ်ခုံကို ထိုင်ဖူးကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ အဲဒီအထဲမှာ နိုင်ငံရေးရောင်ရောင် ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်ထင်တယ်နော့..... အစ်မအဲဒီထိုင်ခုံကို မလုနဲ့နော် ထိုင်ခုံလုပွဲကြီး မြန်မြန်ပြီးပါစေ ဆုတောင်းနေတာ........ ဘယ်သူထိုင်ရထိုင်ရ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စိတ်မ၀င်စားဘူး ငါ့အစ်မကြီးသာ ထိုင်ရလို့ကတော့ ထိုင်ခုံခြေထောက်လာချိုးမှာပဲ..... ထိုင်ခုံတချောင်းကျိုးနေတော့ သတိလေးကပ်ပြီးထိုင်တတ်အောင်လို့လေ သတိလေးကပ်နေတော့ မမှားသင့်တာမမှားနိုင်တာပေါ့ဗျာ........
Anonymous said... | Friday, September 18, 2009 12:47:00 AM
ဖွားကိရေ ဒီနေရာလူတဲ့လူတွေက အချောင်သမားတွေဗျ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ မပေးဆပ်ဘဲနဲ့ သူတို့မှ အရှက်မရှိ သွေးတွေနဲ့ ရင်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်လိုချင်သေးတယ် ဒီလိုလူတွေကို ဘာအမိုင်းနဲ့ ရွေးကောက်တင်မြောက်ရမှာလဲဗျ
ကိုလူထွေး said... | Friday, September 18, 2009 2:27:00 AM
the green mile ရုပ်ရှင်ထဲက ခုံကြီးလေ...
သြော်... သူတို့က အဲလိုခုံမှာ ထိုင်ချင်ကြတယ်တဲ့လား...
သားကြီး said... | Friday, September 18, 2009 2:35:00 AM
မပြောပါ)တားတားကိုလည်း ဝင်ပြိုင်ခွင့်ပြုကြပါခင်ည :P
သားကြီး said... | Friday, September 18, 2009 2:36:00 AM
ကုသိုလ်ရပါတယ်ခင်ည အဟိ :P
busymozzee said... | Friday, September 18, 2009 3:47:00 AM
အဲဒီခုံက လူထိုင်ဘို့ ဟုတ်ပါ့မလား.. ဂျဘိုးဒွေ အတွက် မှုတ်ဘူးလား....
မျက်မှန်လေး said... | Friday, September 18, 2009 11:53:00 AM
သုခုမလေဒီ said... | Friday, September 18, 2009 1:10:00 PM
e chair ထက် wheel chair က ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။း) ဒါကြောင့်နေရာမဦးတော့ဘူးနော်။ ပြန်ပြီ။း)
Angel Shaper said... | Friday, September 18, 2009 7:35:00 PM
မီးအဖေက လူကြီးနော်။ ၀င်ပြိုင်ခွင့်ပြုပါ။
ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ လူကြီးဖြစ်နေပြီအဖေက.... ဟိဟိ
ဝက်ဝံလေး said... | Saturday, September 19, 2009 10:53:00 PM
ဟဟဟ ဖွားကိရေ အဲဒီ ခုံကြီးဆိုရင် တော့ နင်ထိုင် ငါ ထိုင်ဆိုပြီး ဘောလီဘော ပုတ်သလို တွန်း ပို့နေမှာ မြင်ယောင်သေးးး အဟေးးးအဟေးးးး